Akanjo Pu-zipo, kitapo fatoriana, akanjo ivelany, fonon-tànana vita amin'ny hoditra - Besttone
Hebei Besttone Fashion Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2005, dia orinasa mpivarotra matihanina sy feno manambatra fikarohana ara-teknika sy fampandrosoana, akanjo PU, akanjo lamba, fitafiana ary fanamboarana entana ivelany. Ny orinasa dia manana ekipa mpamorona sy famokarana tena tsara mba hiantohana ny fampidirana akaiky ny fikarohana ka hatramin'ny famokarana.
Palitao bisikileta vehivavy malemy paika
Azafady mba avelao izahay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay
Mifandraisa aminay Besttone
Mamorona mpamokatra ivelany vaovao ...
Tamin'ny Mey of 2020, The Besttone co., Ltd dia nanangana departemanta vaovao- Sampana vokatra fiarovana ivelany. Manomboka ny fikarohana ary mampivelatra ireo vokatra fiarovana ivelany. 20 taona lasa, The ...
Mandray anjara amin'izao tontolo izao Epi ...
Voakasiky ny toe-javatra manerantany momba ny valanaretina coronavirus vaovao, ny orinasa dia manomboka manao sarontava fikarohana sy baiko misaron-tava ny vokatra haingana, mba hanao ny ezaka ataontsika manokana ho fisorohana ny valanaretina. Si ...